आमा मलाई छिटो लैजानु न गार्हो भैसक्यो भन्दै त्रिभुवन बिमानस्थलबाट हात हल्लाउंदै गएको छोराको उतै मृत्यु, शव पनि उतै जलाइयो, बाआमा रुदै नेपाल फर्किए (भिडियो) – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आमा मलाई छिटो लैजानु न गार्हो भैसक्यो भन्दै त्रिभुवन बिमानस्थलबाट हात हल्लाउंदै गएको छोराको उतै मृत्यु, शव पनि उतै जलाइयो, बाआमा रुदै नेपाल फर्किए (भिडियो)
छोरालाई निको बनाएर ल्याउने आशामा भारत गएका उनका अभिभावक अहिले रुँदै नेपाल फर्किएका छन् । राजेशको उपचारका क्रममा निधन भएको छ । छोरा उतै अस्ताएपछि बुवा रामकुमार राई अहिले रुँदै नेपाल फर्किएका हुन् ।
तर भारतका चिकित्सकहरुले उनको कलेजोमा समस्या नभएको र उपचारका लागि आउन निकै ढिलो भइसकेको जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले एक वर्ष अघि नै उपचारका लागि आएको भए मात्र बचाउने सकिने जवाफ दिएको बताए । नेपालमा उनको रोग नै राम्रोसंग पहिचान नभएका कारण उपचारमा ढिलाई हुँदा बचाउन नसकिएको भारतका चिकित्सकको भनाई थियो । १२ वर्षका राजेशलाई कलेजोमा ट्युमर पलाएर क् या न्स र भएको चिकित्सकले बताएका थिए ।
टाउको नभएको मानिस अचानक सडकमा आरामले हिडन थालेपछि यस्तो भयो !(भिडियो सहित )
नेपाली झंडा जलाउने मकवानपुर बाट प क्राउ ! ज्ञानेन्द्र शाहीको लाइभ भिडियो हेर्नुहोस